यस्तो वेश्यालय : जहाँ सित्तैमा सेक्स गर्न पाइन्छ, तर भिडियो बजारमा !
वेश्यालय भन्ने बित्तिकै मानिसहरु पैसा तिरेर राख्ने शारिरीक सम्बन्ध भन्ने बुझ्छन् । विश्वमा यौन ब्यवसायीहरुकोमा पुरुषहरु पैसा तिरेर आफ्नो यौन आतुर मेटाउछन् । यदि उनिहरु संग पैसा छैन भने वेश्यालय जान असम्भव नै हुन्छ ।
तर दुनियामा यस्तो वेश्यालय छन् जहाँ पुरुषहरु लाई बिना पैसा नै यौन सम्बन्घ राख्न दिन्छन् । स्लोभाकियामा यसतो बेस्या लय छन् । जहाँ सितैमा यौनक्रिडा गर्न पाईन्छ ।
सुन्दै अच्च्मै लाग्दो हेन ? सितैमा यौनक्रिडा गर्न पाईने रे । त्याँहा यौनकर्मी महिलाहरुले यौनकर्म गरेबापत आफ्ना ग्राहकबाट रकम असुल्दैनन् । त्यसैले पनि सहवास गर्नका लागी मानिसहरुको लाइन नै लाग्ने गरेका छन् ।
तर सहवास गरिरहँदा भिडियो खिच्न मान्नुपर्छ । यो शर्त भने ति ग्राहकले मान्नु पर्ने हुन्छ । ति यौन कर्मी महिलासंग सेक्स गरिरहेको समयमा पोर्न फिल्ममा जसरी उनीहरुको यौनक्रिडालाई छायांकन गरिन्छ । जुन भिडियोलाई उनिहरुले ब्यबसायिक रुपमा बेचेर राम्रो आम्दानी समेत गर्दै आएका छन् । एजेन्सी